समाचार – Page 992
चाडपर्वका बेला नक्कली नोटको कारोबार : पाँचसयको नक्कली नोट भेटियो !!
October 17, 2017 Spnews Comments Off on चाडपर्वका बेला नक्कली नोटको कारोबार : पाँचसयको नक्कली नोट भेटियो !!
बाँके: बाँकेको नेपालगञ्ज बजारमा नक्कली पाँचसयको नोटको कारोबार भइरहेको पाइएको छ । नेपालगञ्जको सुनगाभा स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडले बचत कर्तालाई रकम फिर्ता दिनका लागि न्युरोडमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडबाट चेकमार्फत असोज २४ गते रकम झिकेको […]
बस दुर्घटनामा २ को मृत्यु, १२ जना घाइते
October 17, 2017 Spnews Comments Off on बस दुर्घटनामा २ को मृत्यु, १२ जना घाइते
डोटी, ३१ असोज : डोटीको गोगनपानीमा बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको छ । दुईवटा बस आपसमा ठोक्किँदा उक्त दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा बैतडी दशरथचन्द नगरपालिकाकी ८० वर्षिया दौपदी भण्डारी र डडेलधुरा पर्शुराम नगरपालिकाका १३ वर्षे बिक्रम बोहराको […]
एमबीबीएस परीक्षामा अत्याधुनिक प्रविधीबाट चिट चोर्ने र चोराउने हरुको खास खुलासा (भिडियो)
October 17, 2017 Spnews Comments Off on एमबीबीएस परीक्षामा अत्याधुनिक प्रविधीबाट चिट चोर्ने र चोराउने हरुको खास खुलासा (भिडियो)
काठमाडौं: एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा गोप्य डिभाइस मार्फत चिट चोराउने गिरोहका नाइके समिर कुमार झा प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। गत शनिवार काठमाडौंका १७ वटा क्याम्पसमा परीक्षा चलिरहेको समयमा प्रहरीले इलेक्ट्रोनिक डिभाइस मार्फत चिट चोरिरहेका विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको थियो। […]
प्रहरी ग्राहक बनि भित्र छिर्दा भेटीए १४ वर्षीय किशोरीहरु (फोटो सहित)
October 17, 2017 Spnews Comments Off on प्रहरी ग्राहक बनि भित्र छिर्दा भेटीए १४ वर्षीय किशोरीहरु (फोटो सहित)
प्रहरीले छापा मारेर यौनधन्दामा संलग्न रहेका ५ बालिका र ९ युवतीसहित यौनधन्दा चलाउनेहरुलाई पक्राउ गरेको छ । सुराकीको आधारमा प्रहरी आफैं ग्राहक बनेर गएर यौनधन्दाको पर्दाफास गरेको हो । सबैलाई अदालत पेश गरिएकोमा अदालतले बनलिकाहरुलाई […]
October 17, 2017 Spnews Comments Off on सुनको मूल्य घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ !!
देउवा सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरियो, गृहमन्त्रीमा गच्छदार !
October 17, 2017 Spnews Comments Off on देउवा सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरियो, गृहमन्त्रीमा गच्छदार !
काठमाडौं, ३१ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । माओवादी केन्द्रको आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार भेट गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी […]
चार वर्षमा चार सरकार, १७८ मन्त्री ! (नाम सहित)
October 17, 2017 Spnews Comments Off on चार वर्षमा चार सरकार, १७८ मन्त्री ! (नाम सहित)
प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ९९, समानुपातिकका ७१, मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत एक सांसद र आठ गैरसांसद मन्त्री बने काठमाडौं । संविधानसभा र रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को चारवर्षे कार्यकालमा चार सरकार गठन हुँदा मुलुकले १७८ मन्त्री पायो । ती सरकारमध्ये कांग्रेसका तत्कालीन […]
बहालमा बस्नेलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाउने, हटाए अरुलाई घरधनीले राख्‍न नपाउने नियम पारित
October 17, 2017 Spnews Comments Off on बहालमा बस्नेलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाउने, हटाए अरुलाई घरधनीले राख्‍न नपाउने नियम पारित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका सातवटा विधेयक सोमबार प्रमाणीकरण गरेकी छिन्- मुलुकी देवानी (संहिता), मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), मुलुकी अपराध (संहिता), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण […]
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर जुवा खेल्दै गरेका माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पक्राउ
October 17, 2017 Spnews Comments Off on सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर जुवा खेल्दै गरेका माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पक्राउ
चौतारा, ३१ असोज । राज्यले नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम लिएर जुवा खालमा बसेका एकजना जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गरेको छ । बलेफी गाउँपालिका– ६ (साबिक माम्खा गाविस) का वडाध्यक्ष चित्रवहादुर तामाङलाई प्रहरीले अँधेरीस्थित […]
कैदीबन्दीलाई ४३ इन्चको एलइडी टेलिभिजन
October 17, 2017 Spnews Comments Off on कैदीबन्दीलाई ४३ इन्चको एलइडी टेलिभिजन
लमजुङ, ३१ असोज । जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले ४३ इन्चको एलइडीसहित दुई थान टेलिभिजन पाएका छन् । कारगारभित्र रहेका पुरुष तथा महिला कैदीबन्दीलाई छुट्टाछुट्टै दुई थान टेलिभिजन प्रदान गरिएको हो । संसद् विकास कोषबाट पूर्व […]
« 1 … 991 992 993 … 1,176 »